5x7 Led Projector Laydhka Nalalka 1984-2001 Jeep Cherokee XJ Led Lights with High Low Beam DRL Turn Signaal
Bogga ugu weyn > Gawaarida Gawaarida Gawaarida > Cherokee XJ Headlights 1984-2001
Tayo sare 5x7 inji dhagaxan ayaa horseeday nalka hore ee gawaarida jeep cherokee xj / GMC oo leh giraan halo qaabeeya
Nalalka laydh ee loo yaqaan 'peterbilt / chevy' 4x6 inch oo nalka hore ee korantada loogu talagalay baabuurta waaweyn
4x6 inch nalka hore ee Truck for kenworth t800 peterbilt led headlamp
DOT waxay ansaxisay 5X7 inji oo hogaaminaya laydhadhka korontada, aad uga ifaya kana adkaysi badan laydhadhka caadiga ah ama laydhka kale. Ku habboon Jeep Cherokee XJ 1984-2001, Jeep Wrangler YJ 1987-1995.
Our Jeep Cherokee XJ Led Headlights waxay la yimaadaan 6500K heerkul midab leh oo u xira qoraxda dabiiciga si loo hagaajiyo hufnaanta aragtida wadista iyo kordhinta raaxada wadista. Wanaagsan waxqabadka biyaha iyo boodhka. Kiiska guriyeynta waara oo leh kuleylka kuleylka waxqabadka wanaagsan. Cufnaanta sare ee tamarta iyo iftiinka iftiinka si loo ballaariyo khadka aragtida, waxay kuu siyaadinaysaa xaalado waditaan aamin ah. Nalalka nalalka 5x7 Led Projector waxay leeyihiin adeegsi hooseeya, hufan, keydinta tamarta iyo astaamaha ilaalinta deegaanka. Waqtiga jawaab celinta korontada / dabka, Nolol adeeg dheer ah in kabadan 50000 saacadood. Bareeso oo ciyaar, rakibidda fudud, badanaa waxay kugu kacdaa qiyaastii 15 daqiiqo rakibidda. Ku habboon Jeep Wrangler Jeep Cherokee XJ 1984-2001, Jeep Wrangler YJ 1987-1995.
faahfaahinta of Jeep Cherokee XJ Led Headlights
Number Model MS-5798
aragti 5x7 laba jibaaran nalka hore ee gaariga
Beam Sare 78W 4000LM
Laydhka Hoose 54W 2800LM
Hababka Dogob sare, dogob hoose, drl cad, calaamado jeedin amber
Just Bareeso oo ciyaaro, Rakibaadda ku dhammaatay 15 daqiiqo gudahood.
Ogeysiis Muhiim ah: Wax ka beddelka qaar ka mid ah baaldiga nalka hore ee gaariga ayaa laga yaabaa in loo baahdo haddii gadaasha dambe ee nalka hore uu leeyahay meel xadidan, laakiin inta badan baabuurta, waa la furaa oo la ciyaaraa waxayna ku qaadaneysaa oo kaliya 15 daqiiqo inaad ku rakibto qalabka gacanta ee aasaasiga ah.
Waxaan leenahay awood weyn oo aan ku maareyn karno jibbaaradaan, iyaga oo siinaya awood ku filan oo ay ku iftiimin karaan ayagoo iska ilaalineyno awood aad u badan oo lagu gubo goobahan. Waxqabadka deggan iyo cimriga dheer ayaa tan ka yimid.
Laydhka hoose: 54w (1 * 24w 7375 chip + 2 * 15w 1860 chip, brand chip: ETI)
Laydhka sare: 78w (2 * 24w 7375 chip + 2 * 15w 1860 chip, brand chip: ETI)
Qalabka neefsashada waxaa loogu talagalay gudaha nalka si loo fududeeyo is-weydaarsiga gaasaska kulul iyo kuwa qabow ee u dhexeeya gudaha iyo dibedda nalka si loo ogaado kala-baxa kuleylka iyo isu dheelitirka cadaadiska hawada gudaha iyo dibedda ee laambadda. Waxay sidoo kale ka hortagi kartaa boodhka iyo biyuhu inay galaan gudaha nalka.
Qaab dhismeedka Aluminium ee loo yaqaan 'Die-cast Aluminium' halkii loo isticmaali lahaa guryaha caagga ah ee sida caadiga ah looga isticmaalo suuqa si looga caawiyo nalka hore ee nadaafadda hawo kulul. Waxaan sidoo kale leenahay Aluminium kuleylka kuleylka ah ee gudaha laambadda, sidaa darteed gebi ahaanba waxaan leenahay nidaamyo laba jibbaar kuleylka ah si aan u taageerno sheygan inuu leeyahay waxqabad wanaagsan inta lagu jiro isticmaalka.
Muraayadaha ka baxsan Transparent ee leh daaha xoqida u adkaysta iyo qarashka u adkaysta UV si loo ilaaliyo badeecada oo loo sii haysto cimri dheer.
Faa'iidooyinka 5x7 Led Projector Laydhka hore